Cirbadeynta Saxnaanta Sare ee ugu Fiican YH-850 Soo-saare iyo Warshad | Beilun
Cilmi-baarista mashiinka wax lagu duro ee duritaanka iyo horumarinta
Sannad kasta, waxaan maal-gashanaa wax badan oo dad ah oo ku saabsan cilmi-baarista iyo horumarinta mashiinnada wax lagu duro ee cirbadeynta Illaa iyo hadda waxaan helnay dhowr shatiyeedyo iyo xuquuq madax-bannaan oo aqooneed. Waxaan aad u xiiseyneynaa hagaajinta isku-xirnaanta mashiinka aadanaha, cilmi-baarista iyo horumarinta wax-ka-qabashada cirbadaha xawaaraha sare leh, iyo cirbadeynta saxda ah ee xakamaynta xasilloon ee dhinaca PC-ga.
Kooxdayada cilmi baarista iyo horumarinta waxay ku takhasusay falanqaynta xogta iyo hagaajinta qaabdhismeedka. Waxay u heellan yihiin cilmi-baarista iyo horumarinta nidaamyada xakamaynta kombuyuutarka, nidaamyada Haydarooliga, qalabka korontada, iwm. Dhowrkii sano ee la soo dhaafay, waxaan soo uruuriney khibrad aad u fara badan, illaa iyo haddana, waxay noqotay mid mira dhal ah.
Waxaan sii wadi doonnaa inaan nafteena u hurno cilmi baarista iyo horumarinta mashiinada wax taaj oo kale ee cirbadeynta. Waxaa naga go'an inaan hogaamiye ka noqono warshadaha wax taaj oo kale ee duritaanka.
Xakamaynta tayada dhammaan qaybaha farsamada
Kooxdayada QC waxay ku xakameysaa tayada mashiinka, mashiinka iyo dhammaan qeybaha mashiinka. Waxaan u adeegsanaa CAM si aan u hubino in qaabka iyo qeybaha kale ay qaab daranyihiin ka hor kulanka, iyo in aan hubino in cabirka qeybaha oo dhan ay ku jiraan xadka dulqaadka ee sawirka 2D.
Faahfaahinta Cutub YH-850
Ballaca Ballaca мм 90
Wareeji Saamiga L / D L / D 24.4
Mugga Toogashada см3 3179.3
Miisaanka Toogashada (PS) g 2988.5
Cadaadiska Cirbadaha Mpa 211
Miisaanka duritaanka (PS) g / s 516.1
Awoodda caaga (PS) g / s 106.8
Xawaaraha xawaaraha rpm 127
Garaacista istaroogga KN 8800
Faalig ku dhacay мм 1040
Meel udhaxeysa Xarkaha мм 1000 * 1000
Ugu badnaan Qaab Adag мм 1000
Min. Qaab Adag мм 420
Faaligga Ejector мм 283
Force Ejector KN 212.3
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Kw 37 + 37
Awood kululaynta KW 61
Qiyaasta Mashiinka M 10.9. * 2.5 * 2.8
Miisaanka Mashiinka T 38
Hore: Cirbadeynta Qiyaasta Sare ee YH-420
Wax taaj oo kale duritaanka sax, Cirbadeynta saxda ah, Mashiinka wax taaj oo kale duritaanka Dhuuban, Saxsanaanta wax taaj oo kale, Sax Wax taaj oo kale Inc., Sax Wax taaj oo kale duritaanka caaga,